Myanmar Net - Download Facebook Videos - BajarFB.com
Myanmar Net is the leading Internet Service Provider in Myanmar withastrong reputation for its service quality and best price. Myanmar Net isabusiness of Frontiir which has both NFS(I) and IGW licenses.
Myanmar Net isaleading Internet Service Provider in Myanmar withastrong reputation for its performance, customer service and affordable price. It offers unlimited postpaid monthly Internet plans for home and office uses and prepaid plans for individuals. Myanmar Net isabusiness of Frontiir, which has both NFS(I) and IGW licenses and is known for its innovations and mission to help bridge the digital divide.
FB URL: https://www.facebook.com/myanmarnetinternet/
“မြန်မာနက်တွင်သာ ရရှိမည့် အထူးအစီအစဉ်”
How to MN+Telenor for iOS
How to MN+Telenor for Android
"အင်တာနက် အဝသုံး ၊ ရုပ်ရှင်တွေ အဝကြည့်"
Myanmarnet - Howto connect
မြန်မာနက်အကောင့်ရှိပြီးသူများအတွက် မြန်မာကတ်ကို ကြည့်ရှုခြင်း
ဖိုင်ဘာကွန်ရက်တိုးချဲ့မှု - အလုံမြို့နယ်
#Myanmarnet #Fiber_Internet #MDY_Expansion “ဖိုင်ဘာအင်တာနက်ကွန်ရက်တိုးချဲ့မှု - မဟာအောင်မြေ၊ မန္တလေး” မဟာအောင်မြေမြို့နယ် မန္တလေးမြို့တွင် ဖိုင်ဘာအင်တာနက်ကွန်ရက် တိုးချဲ့မှုကြောင့် အောက်ပါနေရာများတွင် ပိုတန်၊ ပိုမြန်သော မြန်မာနက်ဖိုင်ဘာအင်တာနက်အစီအစဉ်များကို မှာယူအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ ၃၅ လမ်းမှ ၄၁ လမ်း ကြား နှင့် ၆၆ လမ်းမှ ၆၈ လမ်းကြားဧရိယာနေရာများ ၃၅ လမ်းမှ ၄၁ လမ်း ကြား နှင့် ၆၆ လမ်းမှ လမ်း ၇ဝ ကြားဧရိယာနေရာများ အတန်ဆုံး အမြန်ဆုံး ဖိုင်ဘာအင်တာနက်အစီအစဉ်များ - ၃၂,ဝဝဝ ကျပ် 8 Mbps + အိမ်ပြင်သုံးအကောင့် ၂ ခု - ၄၄,ဝဝဝ ကျပ် 12 Mbps + အိမ်ပြင်သုံးအကောင့် ၂ ခု - ၆၄,ဝဝဝ ကျပ် 23 Mbps + အိမ်ပြင်သုံးအကောင့် ၃ ခု - ၈၃,ဝဝဝ ကျပ် 30 Mbps + အိမ်ပြင်သုံးအကောင့် ၃ ခု - ၁၂၀,၀၀၀ ကျပ် 55 Mbps + အိမ်ပြင်သုံးအကောင့် ၃ ခု တပ်ဆင်ကြေး - ၂၉,၀၀၀ ကျပ် ၊ စပေါ်ငွေ - ၁၀,၀၀၀ ကျပ် (ကြိုသွင်းငွေမလိုသည့် ၃ လ စာချုပ်) ယခုအခါ ရန်ကုန်မြို့ တောင်ဥက္ကလာ၊ အရှေ့ဒဂုံ၊ တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုန်၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်၊ တာမွေ၊ ကြည့်မြင်တိုင်၊ စမ်းချောင်း၊ ဒဂုံ၊ သာကေတ၊ ပုဇွန်တောင်၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်၊ ကျောက်တံတား၊ ပန်းဘဲတန်း၊ လသာ၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်များ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် FMI City နှင့် မန္တလေးမြို့ ချမ်းအေးသာဇံ၊ မဟာအောင်မြေ တို့တွင် ဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဖြင့် တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဖိုင်ဘာမရရှိသေးသည့် အခြားမြို့နယ်များအတွက် အဝသုံးအင်တာနက်ကို တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဖိုင်ဘာအင်တာနက်ကို မှာယူတပ်ဆင်ရန်အတွက် မြန်မာနက်ဝန်ဆောင်မှုဌာန ၀၉ ၇၆၅၃၃ ၈၄၄၁ တယ်လီနောနှင့် အူရီဒူးဖုန်းများအတွက် ၈၄၄၁ မြန်မာနက်သည် Frontiir ၏ လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ UNICODE “ဖိုငျဘာအငျတာနကျကှနျရကျတိုးခြဲ့မှု - မဟာအောငျမွေ၊ မန်တလေး” မဟာအောငျမွမွေို့နယျ မန်တလေးမွို့တှငျ ဖိုငျဘာအငျတာနကျကှနျရကျ တိုးခြဲ့မှုကွောငျ့ အောကျပါနရောမြားတှငျ ပိုတနျ၊ ပိုမွနျသော မွနျမာနကျဖိုငျဘာအငျတာနကျအစီအစဉျမြားကို မှာယူအသုံးပွုနိုငျပါပွီ။ ၃၅ လမျးမှ ၄၁ လမျး ကွား နှငျ့ ၆၆ လမျးမှ ၆၈ လမျးကွားဧရိယာနရောမြား ၃၅ လမျးမှ ၄၁ လမျး ကွား နှငျ့ ၆၆ လမျးမှ လမျး ၇ဝ ကွားဧရိယာနရောမြား အတနျဆုံး အမွနျဆုံး ဖိုငျဘာအငျတာနကျအစီအစဉျမြား - ၃၂,ဝဝဝ ကပျြ 8 Mbps + အိမျပွငျသုံးအကောငျ့ ၂ ခု - ၄၄,ဝဝဝ ကပျြ 12 Mbps + အိမျပွငျသုံးအကောငျ့ ၂ ခု - ၆၄,ဝဝဝ ကပျြ 23 Mbps + အိမျပွငျသုံးအကောငျ့ ၃ ခု - ၈၃,ဝဝဝ ကပျြ 30 Mbps + အိမျပွငျသုံးအကောငျ့ ၃ ခု - ၁၂၀,၀၀၀ ကပျြ 55 Mbps + အိမျပွငျသုံးအကောငျ့ ၃ ခု တပျဆငျကွေး - ၂၉,၀၀၀ ကပျြ ၊ စပျေါငှေ - ၁၀,၀၀၀ ကပျြ (ကွိုသှငျးငှမေလိုသညျ့ ၃ လ စာခြုပျ) ယခုအခါ ရနျကုနျမွို့ တောငျဥက်ကလာ၊ အရှဒေ့ဂုံ၊ တောငျဒဂုံစကျမှုဇုနျ၊ ဒဂုံဆိပျကမျး၊ မင်ျဂလာတောငျညှနျ့၊ တာမှေ၊ ကွညျ့မွငျတိုငျ၊ စမျးခြောငျး၊ ဒဂုံ၊ သာကတေ၊ ပုဇှနျတောငျ၊ ဗိုလျတဈထောငျ၊ ကြောကျတံတား၊ ပနျးဘဲတနျး၊ လသာ၊ လမျးမတျောမွို့နယျမြား၊ လှိုငျသာယာမွို့နယျ FMI City နှငျ့ မန်တလေးမွို့ ခမျြးအေးသာဇံ၊ မဟာအောငျမွေ တို့တှငျ ဖိုငျဘာအငျတာနကျဖွငျ့ တပျဆငျအသုံးပွုနိုငျပွီး ဖိုငျဘာမရရှိသေးသညျ့ အခွားမွို့နယျမြားအတှကျ အဝသုံးအငျတာနကျကို တပျဆငျအသုံးပွုနိုငျပါသညျ။ ဖိုငျဘာအငျတာနကျကို မှာယူတပျဆငျရနျအတှကျ မွနျမာနကျဝနျဆောငျမှုဌာန ၀၉ ၇၆၅၃၃ ၈၄၄၁ တယျလီနောနှငျ့ အူရီဒူးဖုနျးမြားအတှကျ ၈၄၄၁ မွနျမာနကျသညျ Frontiir ၏ လုပျငနျးအမှတျတံဆိပျတဈခု ဖွဈသညျ။
#Myanmarnet #MN_Plus #Fiber ဖိုင်ဘာကွန်ရက်တိုးချဲ့မှု - တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ရန်ကုန်မြို့ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ပါရမီလမ်းနှင့် ရတနာလမ်းကြား ၊ သုမင်္ဂလာလမ်းနှင့် ပုဇွန်တောင်ချောင်းတစ်လျှောက်နေရာများတွင် မြန်မာနက် ဖိုင်ဘာကွန်ရက်များကို တိုးချဲ့မှုများကြောင့် ပိုတန်၊ ပိုမြန်သော မြန်မာနက် ဖိုင်ဘာအင်တာနက်အစီအစဉ်များကို တောင်ဥက္ကလာပတစ်မြို့နယ်လုံးနီးပါးတွင် မှာယူအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ - ၃၂,ဝဝဝ ကျပ် 8 Mbps + အိမ်ပြင်သုံးအကောင့် ၂ ခု - ၄၄,ဝဝဝ ကျပ် 12 Mbps + အိမ်ပြင်သုံးအကောင့် ၂ ခု - ၆၄,ဝဝဝ ကျပ် 23 Mbps + အိမ်ပြင်သုံးအကောင့် ၃ ခု - ၈၃,ဝဝဝ ကျပ် 30 Mbps + အိမ်ပြင်သုံးအကောင့် ၃ ခု - ၁၂၀,၀၀၀ ကျပ် 55 Mbps + အိမ်ပြင်သုံးအကောင့် ၃ ခု - ၁၅၈,ဝဝဝ ကျပ် 75 Mbps + အိမ်ပြင်သုံးအကောင့် ၄ ခု ၆၅၀,၀၀၀ ကျပ်အထိ အခြားအစီအစဉ်များလည်း ရှိပါသည်။ တပ်ဆင်ကြေး - ၂၉,၀၀၀ ကျပ် ၊ စပေါ်ငွေ - ၁၀,၀၀၀ ကျပ် ဤအစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုရန် လစဉ်ကြေး တစ်လချင်းစီသာ ပေးသွင်းရမည့် ၃လ စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန် လိုအပ်ပြီး အောက်ပါလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် စာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ https://goo.gl/6GNbiu ရန်ကုန်မြို့ တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုံ၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်၊ တာမွေ၊ ကြည့်မြင်တိုင်၊ စမ်းချောင်း၊ ဒဂုံ၊ သာကေတ၊ ပုဇွန်တောင်၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်၊ ကျောက်တံတား၊ ပန်းဘဲတန်း၊ လသာ၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်များ၊ FMI City နှင့် မန္တလေးမြို့ ချမ်းအေးသာဇံ၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်မျာ့းတွင် ဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဖြင့် တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဖိုင်ဘာမရရှိသေးသည့် အခြားမြို့နယ်များအတွက် အဝသုံးအင်တာနက်ဖြင့် တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဖိုင်ဘာအင်တာနက်ကို မှာယူတပ်ဆင်ရန်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုဌာန - ၀၉ ၇၆၅၃၃ ၈၄၄၁ တယ်လီနောနှင့် အူရီဒူးဖုန်းများ ၈၄၄၁ မြန်မာနက်သည် Frontiir ၏ လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ UNICODE ဖိုငျဘာကှနျရကျတိုးခြဲ့မှု - တောငျဥက်ကလာပမွို့နယျ ရနျကုနျမွို့ တောငျဥက်ကလာပမွို့နယျရှိ ပါရမီလမျးနှငျ့ ရတနာလမျးကွား ၊ သုမင်ျဂလာလမျးနှငျ့ ပုဇှနျတောငျခြောငျးတဈလြှောကျနရောမြားတှငျ မွနျမာနကျ ဖိုငျဘာကှနျရကျမြားကို တိုးခြဲ့မှုမြားကွောငျ့ ပိုတနျ၊ ပိုမွနျသော မွနျမာနကျ ဖိုငျဘာအငျတာနကျအစီအစဉျမြားကို တောငျဥက်ကလာပတဈမွို့နယျလုံးနီးပါးတှငျ မှာယူအသုံးပွုနိုငျပါပွီ။ - ၃၂,ဝဝဝ ကပျြ 8 Mbps + အိမျပွငျသုံးအကောငျ့ ၂ ခု - ၄၄,ဝဝဝ ကပျြ 12 Mbps + အိမျပွငျသုံးအကောငျ့ ၂ ခု - ၆၄,ဝဝဝ ကပျြ 23 Mbps + အိမျပွငျသုံးအကောငျ့ ၃ ခု - ၈၃,ဝဝဝ ကပျြ 30 Mbps + အိမျပွငျသုံးအကောငျ့ ၃ ခု - ၁၂၀,၀၀၀ ကပျြ 55 Mbps + အိမျပွငျသုံးအကောငျ့ ၃ ခု - ၁၅၈,ဝဝဝ ကပျြ 75 Mbps + အိမျပွငျသုံးအကောငျ့ ၄ ခု ၆၅၀,၀၀၀ ကပျြအထိ အခွားအစီအစဉျမြားလညျး ရှိပါသညျ။ တပျဆငျကွေး - ၂၉,၀၀၀ ကပျြ ၊ စပျေါငှေ - ၁၀,၀၀၀ ကပျြ ဤအစီအစဉျကိုအသုံးပွုရနျ လစဉျကွေး တဈလခငျြးစီသာ ပေးသှငျးရမညျ့ ၃လ စာခြုပျ ခြုပျဆိုရနျ လိုအပျပွီး အောကျပါလငျ့ချမှတဈဆငျ့ စာခြုပျ ခြုပျဆိုနိုငျပါတယျ။ https://goo.gl/6GNbiu ရနျကုနျမွို့ တောငျဒဂုံစကျမှုဇုံ၊ ဒဂုံဆိပျကမျး၊ မင်ျဂလာတောငျညှနျ့၊ တာမှေ၊ ကွညျ့မွငျတိုငျ၊ စမျးခြောငျး၊ ဒဂုံ၊ သာကတေ၊ ပုဇှနျတောငျ၊ ဗိုလျတဈထောငျ၊ ကြောကျတံတား၊ ပနျးဘဲတနျး၊ လသာ၊ လမျးမတျောမွို့နယျမြား၊ FMI City နှငျ့ မန်တလေးမွို့ ခမျြးအေးသာဇံ၊ မဟာအောငျမွမွေို့နယျမြာ့းတှငျ ဖိုငျဘာအငျတာနကျဖွငျ့ တပျဆငျအသုံးပွုနိုငျပွီး ဖိုငျဘာမရရှိသေးသညျ့ အခွားမွို့နယျမြားအတှကျ အဝသုံးအငျတာနကျဖွငျ့ တပျဆငျအသုံးပွုနိုငျပါသညျ။ ဖိုငျဘာအငျတာနကျကို မှာယူတပျဆငျရနျအတှကျ ဝနျဆောငျမှုဌာန - ၀၉ ၇၆၅၃၃ ၈၄၄၁ တယျလီနောနှငျ့ အူရီဒူးဖုနျးမြား ၈၄၄၁ မွနျမာနကျသညျ Frontiir ၏ လုပျငနျးအမှတျတံဆိပျတဈခု ဖွဈသညျ။
iOS သုံး Telenor ဖုန်းများအတွက် မြန်မာနက်အသုံးပြုပုံ
Telenor သုံး Android ဖုန်းများအတွက် မြန်မာနက်အသုံးပြုပုံ
#Myanmarnet #Fiber_Internet ဖိုင်ဘာကွန်ရက်တိုးချဲ့မှု - ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံ မြန်မာနက်မှ ဖိုင်ဘာကွန်ရက်များကို တိုးချဲ့မှုကြောင့် ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တွင် ပိုတန်၊ ပိုမြန်သော မြန်မာနက် ဖိုင်ဘာအင်တာနက်အစီအစဉ်များကို မှာယူအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ - ၃၂,ဝဝဝ ကျပ် 8 Mbps + အိမ်ပြင်သုံးအကောင့် ၂ ခု - ၄၄,ဝဝဝ ကျပ် 12 Mbps + အိမ်ပြင်သုံးအကောင့် ၂ ခု - ၆၄,ဝဝဝ ကျပ် 23 Mbps + အိမ်ပြင်သုံးအကောင့် ၃ ခု - ၈၃,ဝဝဝ ကျပ် 30 Mbps + အိမ်ပြင်သုံးအကောင့် ၃ ခု - ၁၂၀,၀၀၀ ကျပ် 55 Mbps + အိမ်ပြင်သုံးအကောင့် ၃ ခု - ၁၅၈,ဝဝဝ ကျပ် 75 Mbps + အိမ်ပြင်သုံးအကောင့် ၄ ခု ၆၅၀,၀၀၀ ကျပ်အထိ အခြားအစီအစဉ်များလည်း ရှိပါသည်။ တပ်ဆင်ကြေး - ၂၉,၀၀၀ ကျပ် ၊ စပေါ်ငွေ - ၁၀,၀၀၀ ကျပ် ဤအစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုရန် လစဉ်ကြေး တစ်လချင်းစီသာ ပေးသွင်းရမည့် ၃လ စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန် လိုအပ်ပြီး အောက်ပါလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် စာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ https://goo.gl/6GNbiu ရန်ကုန်မြို့ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုံ၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်၊ တာမွေ၊ ကြည့်မြင်တိုင်၊ စမ်းချောင်း၊ ဒဂုံ၊ သာကေတ၊ ပုဇွန်တောင်၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်၊ ကျောက်တံတား၊ ပန်းဘဲတန်း၊ လသာ၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်များ၊ FMI City နှင့် မန္တလေးမြို့ ချမ်းအေးသာဇံ၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်မျာ့းတွင် ဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဖြင့် တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဖိုင်ဘာမရရှိသေးသည့် အခြားမြို့နယ်များအတွက် အဝသုံးအင်တာနက်ဖြင့် တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဖိုင်ဘာအင်တာနက်ကို မှာယူတပ်ဆင်ရန်အတွက် မြန်မာနက်ဝန်ဆောင်မှုဌာန - ၀၉ ၇၆၅၃၃ ၈၄၄၁ တယ်လီနောနှင့် အူရီဒူးဖုန်းများအတွက် - ၈၄၄၁ မြန်မာနက်သည် Frontiir ၏ လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ UNICODE ဖိုငျဘာကှနျရကျတိုးခြဲ့မှု - ဘုရငျ့နောငျပှဲရုံ မွနျမာနကျမှ ဖိုငျဘာကှနျရကျမြားကို တိုးခြဲ့မှုကွောငျ့ ဘုရငျ့နောငျပှဲရုံ၊ မရမျးကုနျးမွို့နယျတှငျ ပိုတနျ၊ ပိုမွနျသော မွနျမာနကျ ဖိုငျဘာအငျတာနကျအစီအစဉျမြားကို မှာယူအသုံးပွုနိုငျပါပွီ။ - ၃၂,ဝဝဝ ကပျြ 8 Mbps + အိမျပွငျသုံးအကောငျ့ ၂ ခု - ၄၄,ဝဝဝ ကပျြ 12 Mbps + အိမျပွငျသုံးအကောငျ့ ၂ ခု - ၆၄,ဝဝဝ ကပျြ 23 Mbps + အိမျပွငျသုံးအကောငျ့ ၃ ခု - ၈၃,ဝဝဝ ကပျြ 30 Mbps + အိမျပွငျသုံးအကောငျ့ ၃ ခု - ၁၂၀,၀၀၀ ကပျြ 55 Mbps + အိမျပွငျသုံးအကောငျ့ ၃ ခု - ၁၅၈,ဝဝဝ ကပျြ 75 Mbps + အိမျပွငျသုံးအကောငျ့ ၄ ခု ၆၅၀,၀၀၀ ကပျြအထိ အခွားအစီအစဉျမြားလညျး ရှိပါသညျ။ တပျဆငျကွေး - ၂၉,၀၀၀ ကပျြ ၊ စပျေါငှေ - ၁၀,၀၀၀ ကပျြ ဤအစီအစဉျကိုအသုံးပွုရနျ လစဉျကွေး တဈလခငျြးစီသာ ပေးသှငျးရမညျ့ ၃လ စာခြုပျ ခြုပျဆိုရနျ လိုအပျပွီး အောကျပါလငျ့ချမှတဈဆငျ့ စာခြုပျ ခြုပျဆိုနိုငျပါတယျ။ https://goo.gl/6GNbiu ရနျကုနျမွို့ တောငျဥက်ကလာပမွို့နယျ၊ တောငျဒဂုံစကျမှုဇုံ၊ ဒဂုံဆိပျကမျး၊ မင်ျဂလာတောငျညှနျ့၊ တာမှေ၊ ကွညျ့မွငျတိုငျ၊ စမျးခြောငျး၊ ဒဂုံ၊ သာကတေ၊ ပုဇှနျတောငျ၊ ဗိုလျတဈထောငျ၊ ကြောကျတံတား၊ ပနျးဘဲတနျး၊ လသာ၊ လမျးမတျောမွို့နယျမြား၊ FMI City နှငျ့ မန်တလေးမွို့ ခမျြးအေးသာဇံ၊ မဟာအောငျမွမွေို့နယျမြာ့းတှငျ ဖိုငျဘာအငျတာနကျဖွငျ့ တပျဆငျအသုံးပွုနိုငျပွီး ဖိုငျဘာမရရှိသေးသညျ့ အခွားမွို့နယျမြားအတှကျ အဝသုံးအငျတာနကျဖွငျ့ တပျဆငျအသုံးပွုနိုငျပါသညျ။ ဖိုငျဘာအငျတာနကျကို မှာယူတပျဆငျရနျအတှကျ မွနျမာနကျဝနျဆောငျမှုဌာန - ၀၉ ၇၆၅၃၃ ၈၄၄၁ တယျလီနောနှငျ့ အူရီဒူးဖုနျးမြားအတှကျ - ၈၄၄၁ မွနျမာနကျသညျ Frontiir ၏ လုပျငနျးအမှတျတံဆိပျတဈခု ဖွဈသညျ။
#Myanmarnet #Coverage_Expansion တာမွေမြို့နယ်တွင် မြန်မာနက်အ၀သုံးအင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်ရန် ကျန်ရှိနေသော နေရာများကို ကွန်ရက်ထပ်မံတိုးချဲ့လိုက်ပါပြီ ... ဖိုးစိန်လမ်း၊ ဦးထွန်းမြတ်လမ်း၊ နတ်မောက်ရိပ်သာလမ်း၊ ကျိုက္ကစံလမ်း (United Living Mall အနီးတ၀ိုက်)၊ သီရိလင်္ကာရာမကျောင်းလမ်း၊ နေမျိုးသူရလမ်း၊ မာလာနွယ်လမ်း (မစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက် နှင့် ဘုံဘေကျောင်းအနီးတ၀ိုက်)၊ စက်မှု ၃ လမ်း နှင့် ပင်ရွှေညောင်လမ်းနေရာများတွင် တစ်လလုံး အ၀သုံးနိုင်တဲ့ လစဉ်အင်တာနက်အစီအစဉ်များကို မှာယူအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ တစ်အိမ်လုံး တစ်လလုံး လစဉ်အဝသုံးအင်တာနက်အစီအစဉ်များ - ၈,၅၀၀ ကျပ် 1.7 Mbps အိမ်ပြင်သုံးအကောင့် ၁ ခု - ၁၂, ၀၀၀ ကျပ် 2.5 Mbps အိမ်ပြင်သုံးအကောင့် ၁ ခု - ၁၆, ၀၀၀ ကျပ် 3.5 Mbps အိမ်ပြင်သုံးအကောင့် ၁ ခု - ၂၄, ၀၀၀ ကျပ် 5.5 Mbps အိမ်ပြင်သုံးအကောင့် ၂ ခု ၆၅၀,၀၀၀ ကျပ်အထိ အခြားအစီအစဉ်များလည်း ရှိပါသည်။ တစ်အိမ်လုံး တစ်လလုံး လစဉ်အဝသုံးအင်တာနက်ကို ရန်ကုန်မြို့တွင်း ၂၅ မြို့နယ်နေရာအနှံ့ နှင့် ၂၇ မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒိုအိမ်ယာများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ *** သုံးစွဲသူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် သီးသန့်တာဝန်ခံ ထားရှိခြင်း၊ အိမ်အရောက် လျင်မြန်စွာ ၀န်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ ၄၈ နာရီအတွင်း အခက်အခဲဖြေရှင်းပေးခြင်းစသည့် ကောင်းထက်ကောင်း ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် မြန်မာနက်ပလက်စ်အင်တာနက်အစီအစဉ်များကိုလည်း မှာယူနိုင်ပါသည်။ မြန်မာနက်ပလက်စ်၏ ကောင်းထက်ကောင်း အင်တာနက်အစီအစဉ်များ - ၃၂,ဝဝဝ ကျပ် 8 Mbps (အိမ်ပြင်သုံးအကောင့် ၂ ခု) - ၄၄,ဝဝဝ ကျပ် 12 Mbps (အိမ်ပြင်သုံးအကောင့် ၂ ခု - ၆၄,ဝဝဝ ကျပ် 23 Mbps (အိမ်ပြင်သုံးအကောင့် ၃ ခု) - ၈၃,ဝဝဝ ကျပ် 30 Mbps (အိမ်ပြင်သုံးအကောင့် ၃ ခု) - ၁၂၀,၀၀၀ ကျပ် 55 Mbps (အိမ်ပြင်သုံးအကောင့် ၃ ခု) ၆၅၀,၀၀၀ ကျပ်အထိ အခြားအစီအစဉ်များလည်း ရှိပါသည်။ တပ်ဆင်ကြေး ၂၉,၀၀၀ ကျပ် နှင့် စပေါ်ငွေ ၁ဝ,ဝဝဝ ကျပ် (ကြိုတင်ငွေသွင်းရန်မလို ၃ လ စာချုပ်) မြန်မာနက်ဝန်ဆောင်မှုဌာန - ၀၉ ၇၆၅၃၃ ၈၄၄၀ တယ်လီနောနှင့် အူရီဒူးဖုန်းများအတွက် - ၈၄၄၀ မြန်မာနက်သည် Frontiir ၏ လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ UNICODE တာမှမွေို့နယျတှငျ မွနျမာနကျအဝသုံးအငျတာနကျအသုံးပွုနိုငျရနျ ကနျြရှိနသေော နရောမြားကို ကှနျရကျထပျမံတိုးခြဲ့လိုကျပါပွီ ... ဖိုးစိနျလမျး၊ ဦးထှနျးမွတျလမျး၊ နတျမောကျရိပျသာလမျး၊ ကြိုက်ကစံလမျး (United Living Mall အနီးတဝိုကျ)၊ သီရိလင်ျကာရာမကြောငျးလမျး၊ နမြေိုးသူရလမျး၊ မာလာနှယျလမျး (မစိုးရိမျကြောငျးတိုကျ နှငျ့ ဘုံဘကြေောငျးအနီးတဝိုကျ)၊ စကျမှု ၃ လမျး နှငျ့ ပငျရှညေောငျလမျးနရောမြားတှငျ တဈလလုံး အဝသုံးနိုငျတဲ့ လစဉျအငျတာနကျအစီအစဉျမြားကို မှာယူအသုံးပွုနိုငျပါပွီ။ တဈအိမျလုံး တဈလလုံး လစဉျအဝသုံးအငျတာနကျအစီအစဉျမြား - ၈,၅၀၀ ကပျြ 1.7 Mbps အိမျပွငျသုံးအကောငျ့ ၁ ခု - ၁၂, ၀၀၀ ကပျြ 2.5 Mbps အိမျပွငျသုံးအကောငျ့ ၁ ခု - ၁၆, ၀၀၀ ကပျြ 3.5 Mbps အိမျပွငျသုံးအကောငျ့ ၁ ခု - ၂၄, ၀၀၀ ကပျြ 5.5 Mbps အိမျပွငျသုံးအကောငျ့ ၂ ခု ၆၅၀,၀၀၀ ကပျြအထိ အခွားအစီအစဉျမြားလညျး ရှိပါသညျ။ တဈအိမျလုံး တဈလလုံး လစဉျအဝသုံးအငျတာနကျကို ရနျကုနျမွို့တှငျး ၂၅ မွို့နယျနရောအနှံ့ နှငျ့ ၂၇ မွို့နယျရှိ ကှနျဒိုအိမျယာမြားတှငျ အသုံးပွုနိုငျပါသညျ။ *** သုံးစှဲသူတဈဦးခငျြးစီအတှကျ သီးသနျ့တာဝနျခံ ထားရှိခွငျး၊ အိမျအရောကျ လငျြမွနျစှာ ဝနျဆောငျမှုပေးခွငျး၊ ၄၈ နာရီအတှငျး အခကျအခဲဖွရှေငျးပေးခွငျးစသညျ့ ကောငျးထကျကောငျး ဝနျဆောငျမှုမြားနှငျ့ မွနျမာနကျပလကျဈအငျတာနကျအစီအစဉျမြားကိုလညျး မှာယူနိုငျပါသညျ။ မွနျမာနကျပလကျဈ၏ ကောငျးထကျကောငျး အငျတာနကျအစီအစဉျမြား - ၃၂,ဝဝဝ ကပျြ 8 Mbps (အိမျပွငျသုံးအကောငျ့ ၂ ခု) - ၄၄,ဝဝဝ ကပျြ 12 Mbps (အိမျပွငျသုံးအကောငျ့ ၂ ခု - ၆၄,ဝဝဝ ကပျြ 23 Mbps (အိမျပွငျသုံးအကောငျ့ ၃ ခု) - ၈၃,ဝဝဝ ကပျြ 30 Mbps (အိမျပွငျသုံးအကောငျ့ ၃ ခု) - ၁၂၀,၀၀၀ ကပျြ 55 Mbps (အိမျပွငျသုံးအကောငျ့ ၃ ခု) ၆၅၀,၀၀၀ ကပျြအထိ အခွားအစီအစဉျမြားလညျး ရှိပါသညျ။ တပျဆငျကွေး ၂၉,၀၀၀ ကပျြ နှငျ့ စပျေါငှေ ၁ဝ,ဝဝဝ ကပျြ (ကွိုတငျငှသှေငျးရနျမလို ၃ လ စာခြုပျ) မွနျမာနကျဝနျဆောငျမှုဌာန - ၀၉ ၇၆၅၃၃ ၈၄၄၀ တယျလီနောနှငျ့ အူရီဒူးဖုနျးမြားအတှကျ - ၈၄၄၀ မွနျမာနကျသညျ Frontiir ၏ လုပျငနျးအမှတျတံဆိပျတဈခု ဖွဈသညျ။
Pieces အပိုင်း ၁ - Selfie
“Justafew Minute” လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်